Nkọwa:Nkwụnye ụgbọala nke ọkụ ọkụ na-adọba ụgbọala,Akpụkpọ ụkwụ nke Shoebox,100W Led Retrofit Kit
Home > Ngwaahịa > Ihe nnweta ozuzu ọkụ > 100W Na-echekwa ụgbọala Lotbox Light Retrofit Kit
Ihe Nlereanya.: BB-SDD-100W-D1
Anyị arụmọrụ dị elu Na-adọba ụgbọala ọkụ Led Retrofit 100w nwere ike ịtinye ngwa ngwa n'ime ihe ọ bụla. Ụlọ ọrụ a na- adọkpụ akpụkpọ ụkwụ dị mma maka ngwugwu mgbidi, ebe a na-adọba ụgbọala, ọkụ ọkụ n'okporo ámá ma ọ bụ ụlọ ọrụ gas. Ihe nkesa 100W Led Retrofit Kit na- abịa na ihe nkwado ogologo maka iji arịgo elu. Biko lelee ihe nkedo na akụkụ iji hụ na e kwesịrị ekwesị. Ndị DLC ruru eru na- eduzi ihe eji eme ihe maka ihe ọkụkụ nwere ike iji nweta nkwụghachi ma ọ bụ ihe mgbali. Nke a na-ebute halogen na-eduzi ọkụ eletrik dị elu, anwụrụ ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ ma gbanwee ọkụ elekere 50,000. nke ndigharị na ndozi.
100W Na-echekwa ụgbọala Lotbox Light Retrofit Kit Kpọtụrụ ugbu a
Ihe nlekota nke 80W maka akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Kpọtụrụ ugbu a
Nkwụnye ụgbọala nke ọkụ ọkụ na-adọba ụgbọala Akpụkpọ ụkwụ nke Shoebox 100W Led Retrofit Kit Ebube ụgbọala na-adọba ụgbọala Ngwongwo mpempe ụgbọala nke ụgbọala ụgbọala Ụgbọ ala nke ụgbọala na-adọba ụgbọala Igwe ọkụ na-adọba ụgbọala Na-adọba ụgbọala na-acha ọkụ ọkụ na-akwado ya